Zviuru zviviri Zvinyorwa uye Tiri Kungotanga! | Martech Zone
Zviuru zviviri Zvinyorwa uye Tiri Kungotanga!
Chitatu, Nyamavhuvhu 5, 2009 Svondo, November 3, 2013 Douglas Karr
Nguva yekupedzisira yandakapemberera kukura kweiyi blog ndipo pandakapfuura iyo 1,000 romukova mucherechedzo munaNovember wa2007. Pano tiri pane zviuru zviviri zvinyorwa uye bhurogu ine hutano, haina hupfumi 🙂 uye yakangwara. Yasvika nguva yekukwirisa notch uye ini ndiri kuenda muhombe.
Kuuya munguva pfupi iko kudzoreredzwa kudiki kwesaiti… kwete… iyo cheesy Windows 2000 remake haisi yekutarisa! Vamwe venyu mungangorangarira pandakachinja duraini kubva ku dknewmedia.com kuenda ku martech.zone… ndiyo yaive chikamu chekutanga pakupatsanura blog kubva ku brand rangu chairo. Izvozvo zvinokuvadza! Ini ndakarasikirwa neangu epamusoro 1,000 chinzvimbo paTechnorati, ndakarasikirwa neTON yemashure backlinks (kunyangwe ini 301'd saiti), uye ndakarasikirwa nechimwe chiremera. Ini ndakavandudza chinzvimbo pane mamwe mazwi akakosha andaishuvira kunongedza kunyangwe… se "Kushambadzira Tekinoroji".
Shanduko yakakura kwazvo ndeyekunyoreswa kwevamwe vashandi vekushambadzira, rimwe nerimwe riine hunyanzvi hwavo:
Jon Arnold - yekushandisa uye wewebhu dhizaini nyanzvi.
Chris Bross - mubhadharo-wega-watinya nyanzvi.
Lorraine Bhora - wekushambadzira uye neruzhinji hukama hukama.
Chris Lucas - wezvemagariro venhau uye wekushambadzira tekinoroji nyanzvi.
Nila Nealy - branding uye zano nyanzvi.
James Paden - ecommerce uye shanduko yekugadzirisa optimization.
Adam Mudiki - nyanzvi yekutengesa nhare.
Bryan Povlinski - achangopedza Kushambadza uye Orr Shamwari… Bryan achange achibatsira blog uye nekupa njere dzake seyechidiki wekushambadzira akapedza kudzidza
Ndanga ndiri mukukurukurirana nevamwe vezvekutengesa vematunhu uye ndinogona kutanga mamwe mabhuku ebasa ari kuuya, mamwe maebook, uye pamwe kunyange musangano.
Kune mamwe masayiti ekushambadzira akanaka kunze uko anotarisana nenhau, maongorori echangobva kuitika uye matekinoroji - asi ini ndinovimba kuzadza mukaha nekuve blog kwaunogona kuwana kuraira kwenyanzvi kuti uite basa rako zuva rega rega. Zvimwe zvinouya!
Ichi chitsauko chitsva uye chinovhara chitsauko pane blog yangu. Ini ndicharamba ndiri mukuru wekubika uye wekuwacha mabhodhoro sezvatinoenderera, asi zvichingodaro Blog yedu iwe unozopihwa akasiyana maonero uye mamwe mikana yekuita nyanzvi dzedu pazuva nezuva.
Sei Usiri Kuratidza Kufambisa?
Aug 6, 2009 pa 12: 54 AM
Makorokoto Doug !! Ramba wakadaro! Ndatenda zvikuru kune ako ese akakosha kunzwisisa.
Zvakanakisa zveyako nyowani yekutengesa!
Aug 6, 2009 pa 2: 29 AM
Aug 6, 2009 pa 1: 43 AM
Inonakidza kwazvo. Ndinofara kuti uri kugara wakabatikana! Ini ndinotenda iyi ipfungwa yakanaka uye handigoni kumirira kuti ndione zvinoitika nevanyori vese vatsva. Inofanira kunge iri kuputika kwezviri mukati! Iwe uchave uchitangisa yako wega blog zvakare? (kwete kuti iwe unenge uine nguva yekunyora kana chero chinhu)
Handisi kuenda, Jason! Ini ndichiri kubloga - ndinovimba kamwe pazuva kana zvakadaro. Tichave tichingowedzera mamwe mazwi ekushambadzira kune musanganiswa uye tichitora kumusoro!
Aug 6, 2009 na12: 45 PM
Makorokoto padanho. Ndiri kufara nekuve chikamu chevane chiuru chinotevera
Aug 6, 2009 na9: 10 PM
Makorokoto nekurova zviuru zviviri!
Chiitiko chinonakidza chingave chekutarisa pamusoro pemablog ako akapfuura zviuru zviviri nekuwana zvinyorwa zvaunonyanya kukoshesa. Kwete kuti zviuru zviviri zvakawandisa, asi kuti mamwe anga achizivikanwa uye aine chinangwa kupfuura vamwe.
Semuverengi wenguva dzose, semuenzaniso, ndinoziva kuti ini ndinogara ndichisvetuka zvako "Zvisungo zveZuva Iri" zvinyorwa asi gara uchifarira "rants" dzako. Zvichida kuzviongorora uku kunogona kubatsira iwe kuenderera nekuvandudza yako blogging kune vako vese vaverengi.